Amathuluzi Wokugenca: Amathuluzi Wokugenca Olusizo Okusetshenziswa ku-GNU / Linux | Kusuka kuLinux
Ukuqhubeka nezincwadi zethu kusuka Itimu yokugenca, namuhla sizokhuluma ngokuningiliziwe iphuzu le- Ukugenca Amathuluzi. Ukuze wenze kanjalo, yazi okunye kokuhle kakhulu nokwaziwa kakhulu amathuluzi esoftware yenzelwe indawo yokusebenza yabasebenzi futhi inothando nge «Ukugenca Nokugqekeza ».
Ngaphezu kwalokho, kuyaphawuleka ukuthi kusho Ukugenca Amathuluzi ingasetshenziswa ngokuphelele kubo bobabili abenza umkhuba we- "Ukugenca kokuziphatha" ngokuqondene nalabo abangakwenzi lokho.
Ukugenca Ngokuziphatha: Izicelo zamahhala nezivuliwe ze-GNU / Linux Distro yakho
Ngaleli thuba, nangaphambi kokungena ngokugcwele esihlokweni, sizoshiya ngezansi ezinye izixhumanisi ezishicilelwe ezedlule ezihlobene naleyo ndaba Ukugenca, ukuze labo abanentshisekelo yokungena kulolu daba bakwazi ukwenza kalula kanjalo.
"Kungani u-Hack ku-GNU / Linux? Ngoba kuyaziwa ukuthi ochwepheshe endaweni ye- "Hacking & Pentesting" bakhetha i-GNU / Linux kune-Windows, MacOS noma enye, ngomsebenzi wabo wobungcweti, ngoba, phakathi kwezinto eziningi, inikeza inani elikhulu lokulawula into ngayinye kwalo. Futhi, kungani yakhiwe kahle futhi yahlanganiswa kangaka nge-Command Line Interface (CLI) yakho, okungukuthi, i-terminal yakho noma i-console. Ngaphezu kwalokho, iphephe ngokwengeziwe futhi isobala ngoba imahhala futhi ivulekile, futhi ngoba iWindows / MacOS imvamisa iba yinto ekhangayo." Ukugenca Ngokuziphatha: Izicelo zamahhala nezivuliwe ze-GNU / Linux Distro yakho
Ukugenca: Akukhona nje ukwenza izinto kangcono kepha ukucabanga kangcono ngezinto
1 Amathuluzi Wokugenca: Amathuluzi Okugqekeza Kahle weLinux
1.1 Ithuluzi Lokugenca 1: I-Metasploit
1.2 Ithuluzi Lokugenca 2: Ithuluzi-X
1.3 Ithuluzi Lokugenca 3: I-Onex
1.4 Amathuluzi wokugenca ali-14 ngaphezulu
1.5 Izixhumanisi ezingeziwe mayelana namathuluzi wokugenca
Amathuluzi Wokugenca: Amathuluzi Okugqekeza Kahle weLinux
3 kwezaziwa kakhulu, ziphelele futhi zisetshenzisiwe Ukugenca Amathuluzi imvamisa kuba okulandelayo:
Ithuluzi Lokugenca 1: I-Metasploit
Kubhekwa njenge- uhlaka lokuhlola ukungena esetshenziswa kakhulu emhlabeni. I-Metasploit kungumkhiqizo wokubambisana phakathi kwe- umphakathi ovulekile y Kushesha7. Isiza amaqembu okuphepha ukuthi enze okungaphezu kokubheka ubungozi, ukuphatha ukuhlolwa kwezokuphepha, nokwenza ngcono ukuqwashisa kwezokuphepha; abavikeli bezitimela nengalo ukuze bahlale behlala begxathu linye (noma ezimbili) ngaphambili.
Ukulanda, ukufaka nokusebenzisa iya ngqo kokulandelayo isixhumanisi. Ngemininingwane eyengeziwe okulandelayo isixhumanisi.
Ithuluzi Lokugenca 2: Ithuluzi-X
Kuyinto a isifaki samathuluzi wokugenca kuqhamuka I-Kali Linux. Ithuluzi-X yenzelwe i- I-termux namanye ama-Operating Systems aseLinux. Ithuluzi-X ungafaka okungaphezulu kwe- Amathuluzi okugenca angama-370 mayelana ne-Termux nokusabalalisa okuhlukahlukene kwe-Linux, okufana ne- Ubuntu noDebian, phakathi kokunye okuningi.
Ukulanda, ukufaka nokusebenzisa iya ngqo kokulandelayo isixhumanisi.
Ithuluzi Lokugenca 3: I-Onex
Ngumphathi wephakeji kubaduni. I-Onex iphatha amathuluzi okugenca angaphezu kwama-370 angafakwa ngokuchofoza okukodwa. Ngaphezu kwalokho, iyithuluzi elikhanyayo nelisheshayo, elifana kakhulu ne- Ithuluzi-X, ngakho-ke ingasetshenziswa esikhundleni se- Ithuluzi-X.
Amathuluzi wokugenca ali-14 ngaphezulu
Ngenkathi abanye Ukugenca Amathuluzi Kuyafana futhi kuyasiza nje:
UkhoziEye: I-Social Engineering Toolkit ukuthola ulwazi kubantu abaku-Intanethi.
Ukuzijabulisa: Uhlaka Lokuhlola Ukungena kanye neThuluzi Lokugenca.
I-GoGhost: Ithuluzi lomthombo ovulekile elisebenza kahle lokuphequlula okukhulu kwe-SMBGhost.
HackingTool: Ithuluzi Lokugenca Bonke-kubanye Kubaduni.
I-hacktronian: Ithuluzi Lokugenca Lonke-linye litholakalela i-Linux ne-Android.
I-Nexphisher: Ithuluzi lokuheha eliphambili le-Linux ne-Termux.
I-Sigit: Ibhokisi lamathuluzi lokuqoqa imininingwane elula.
I-SocialBox: Uhlaka lokuhlasela ngamandla Brute lwamanye amanethiwekhi omphakathi.
I-SQLMap: Umjovo wokuzenzakalela we-SQL nethuluzi lokuthatha idatha.
ITI - Ssh-Client Worm: I-Worm ssh-client eyenziwe ngohlaka lwe-TAS.
I-TeleGram-ScraperIthuluzi lokuthola imininingwane kubasebenzisi bamaqembu eTelegram.
udorkIskripthi sosesho lweGoogle ukuthola imininingwane ebucayi evela kumafayela noma kwizikhombisi-ndlela, phakathi kweminye imisebenzi.
Izikhali zeWebhu likaHacker: Ithuluzi Lamathuluzi Elipholile Lisetshenziswa Abaduni beWebhu.
UZphisher: Ithuluzi lokuphanga elizenzakalelayo.
Izixhumanisi ezingeziwe mayelana namathuluzi wokugenca
Ukukhulisa lolu hlu oluncane lwe Ukugenca Amathuluzi nezinye ezifanayo kusuka Ukuphepha Kwe-IT, okuvamise ukuba yipulatifomu noma ye- I-Windows ne-Android, ungavakashela izixhumanisi ezilandelayo:
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana namanye amathuluzi esoftware amahle kakhulu futhi athandwa kakhulu aziwa ngokuthi «Hacking Tools», enzelwe ngokukhethekile indawo yokusebenza yabasebenzi futhi inentshisekelo nge «Ukugenca Nokugqekeza »; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Amathuluzi Wokugenca: Amathuluzi Wokugenca Olusizo Okusetshenziswa ku-GNU / Linux
Ithuluzi elinjalo alinalusizo uma ungazi ukuthi ulisebenzisa kanjani futhi uma ungaxhumanisi nezifundo noma amabhukwana noma okungcono okwamanje, unikeza izifundo eziningiliziwe kuzo, ngoba azisizi ngalutho.
Sanibonani, Nosirve. Siyabonga ngokuphawula kwakho. Siyethemba ukuthi kancane kancane sizokwazi ukusondela ngamunye wabo ukujulisa ukulanda, ukufakwa kanye nokusetshenziswa kwabo. Noma kunjalo, ngiyabonga kakhulu ngesiphakamiso sakho somusa.